मेस्सीले बार्सिलोनामा खुसी नभएको सुझाव पहिला नै दिएका थिए … | HimalDarpan
मेस्सीले बार्सिलोनामा खुसी नभएको सुझाव पहिला नै दिएका थिए …
बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी हुन् लियोनल मेस्सी । बार्सिलोनामा आफ्नो करिअर लगभग बिताएका उनी पछिल्लो समय भने तनावमा रहेका छन् । यसपटकको च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने सपना बोकेको बार्सिलोनालाई बायर्न म्युनिखले नमिठो झट्का दिदै पाखा लगाइदियो । बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगमा ऐतिहासिक शर्मनाक हार भोग्यो । त्यसयता बार्सिलोनाका खेलाडीहरु मौन रहेका छन् । उक्त खेलबारे बार्सिलोनाका एकजना खेलाडीले पनि टिप्पणी गरेका छैनन् ।
बार्सिलोनाले नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड कोयम्यानलाई नियुक्त गरिसकेको छ । तर, बार्सिलोना नयाँ सिजनका लागि त्यो उत्साह भने नदेखिएको फुटबल समिक्षकहरु बताउँछन् । त्यस्तै लियोनल मेस्सीले क्लब छोड्ने खबर लगातार बाहिर आइनै रहेका छन् । बार्सिलोनाले उनलाई बेच्न भने चाहेको छैन । तर, यदी मेस्सी नै अन्य क्लब जान चाहेमा भने क्लबले रोक्न उनलाई नसक्ने समिक्षकहरु बताउँछन् । कारण उनी बार्सिलोनामा खुसी छैनन् ।
उनले क्लबलाई बारम्बार दिएका सुझावहरुलाई बेबास्था भएको समिक्षकहरु बताउँछन् । उनले स्पेनिस लिग ला लिगाको खेलस्तरको समिक्षा गरेर सुझाव दिइसकेका थिए जुन कुरा मिडियाले विशेषताका साथ प्रकाशित पनि गरेका थिए ।
उनले च्याम्पियन्स लिगमा नापोलीले बार्सिलोनालाई पाखा लगाउने सम्भावना अधिक रहेको र खेल सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । तर, खेल सुध्रिनुको सट्टा झन् लय बिग्रिनाले बार्सिलोनामा उनी खुसी रहेका छैनन् । बार्सिलोनासँगको सम्बन्ध निकै बलियो भएका कारण पनि उनले बार्सिलोनामै रहनुपर्ने केही पक्षहरुको टिप्पणी रहेको छ । केही समिक्षकहरुले भने उनी अब आफ्नो मौनता तोडेर बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् ।
निरंकुश तानाशाह, प्रजातन्त्र रक्षा अनि चिली र एम. सि. सि.